Xasan Shiikhoo ka qaybgalay Xuska Maalinta Dhalinyarada Caalamka oo lagu qabtay Muqdisho (SAWIRRO) – STAR FM SOMALIA
‘’Dhalinyarada waa udub dhexaadka dowladnimada cusub ee Soomaaliyaa. Horumar kasta oo aan hiigsaneyno waxaa hormuud u ah dhalinyarada. Haddii horey loo rumeysnaa in dhalinyarada ay qeyb ka qaateen burburinta waddanka, maanta waxay haystaan fursad dahabi ah oo ay gacan uga geystaan dib u dhiska iyo soo celinta sharaftii iyo karaamadii ay Soomaaliya beesha caalamka ku lahayd’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
“Dhalinyaro badan oo horey loo duufsadey ayaa ka soo noqdey argagixisonimada, doorteyna inay shacabkooda dhinac ka raacaan, waxna u qabtaan dalkooda. Sidoo kale falalki burcad badeednimada ayaa si rasmi ah looga ciribtirey dalka, waxaana taa mahaddeeda iska leh waalidiinta, culumada diinta, ururrada bulshada,dowladda iyo shacabka oo iska kaashadey sidii loo joojin lahaa falalkaasi xun xun’’.
“Waddankan waxaa uu leeyahay kheyraad kala duwan oo bad iyo berriba leh. Geesinimada iyo dhiiranaanta ay dhalinyarada ku tahriibayaan ha loo weeciyo in dalka looga shaqeeysto. Ma jirto sabab ay noloshooda khatar ugu geliyaan badaha. Waa inaad gacan ka geysataan nabadeynta dalka, xooggana aad saartaan waxbarashada iyo inaad xirfadleyaal noqotaan. Si waddanka looga dhiciyo kooxaha dembiileyaasha ah ee dalalkooda ka soo haajirey, waa inaad dowladda iyo laamaha amniga gacan ku siisaan sidii loo ciribtiri lahaa Al Shabaab iyo kuwa la midka ah’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Wafdi ka Socda Midowga Afrika oo Gaaray Magaalada Baardheere Ee Gobalka Gedo